In kasta oo AppleTV + iyo Disney +, haddana Netflix sii ahaan doonaa Boqorka | Wararka IPhone
Netflix waxay maraysaa waxa noqon kara daqiiqadihii ugu xumaa ee taariikhdeeda, shaki la’aan. Shirkaddu hadda waxay ku hareeraysan tahay shirkado ganacsi oo ay si ficil ahaan ah u abuurtay, haddaba waxaan helnay HBO, Disney +, AppleTV + iyo alaabooyin aan dhammaad lahayn oo mid waliba siineyso wax lagu garto taas oo macmiilka ka dhigeysa inuu ka fikiro dalabkan. Si kastaba ha noqotee, sahan dhowaan la sameeyay wuxuu muujinayaa in 75% dadka isticmaala Netflix haba yaraatee aysan xiiseyneynin AppleTV + ama Disney + muddada gaaban, taas oo u maleyneysa isku dhafka booska (ugu yaraan) adeegsadayaasheeda.
Dhinaca kale, Netflix wuxuu ku dhawaaqayaa inuu lumiyay qiyaastii 120.000 isticmaale intii lagu jiray bishii Luulyo Maraykanka oo keliya, Tani waxay xiriir dhow la yeelan kartaa xaqiiqda ah in astaantu ay sii kordheyso bilaabista "wax soo saar u gaar ah" iyada oo qiimaha la joojinayo in loo adeego waxyaabaha dhinac saddexaad ah, iyo kororka joogtada ah ee sicirka ee dhacaya laba sano, taasoo kicinaysa adeegga 4K loogu talagalay afar isticmaale laga bilaabo 12 euro ilaa 16 euro maanta. Dhinaceeda, shirkadda la-talinta Piper Jaffray waxay daraasad ku sameysay 1.500 isticmaale oo helay natiijooyin xiiso leh oo ka duwan saadaasha saxaafadda.
72% isticmaaleyaasha Netflix ma qorsheynayaan inay iska diiwaangeliyaan Disney + iyo 77% kuwa hadda isticmaala Netflix ma qorsheynayaan inay iska diiwaangeliyaan AppleTV + (Mareykanka Mareykanka). Intaas waxaa sii dheer, inta badan jawaabeyaasha ayaa sheegay in xitaa haddii ay kaqeyb qaataan mid kamid ah labadan adeeg ee cusub, ay sii wadi doonaan diiwaangelintooda Netflix. Waxaa jira farqi udhaxeeya qiimaha udhaxeeya qiimaha Netflix iyo labadan adeeg ee iska soo horjeedda, taas oo samayn karta farqi ama kadhigi kara kaabis. Waqtiga ayaa go'aan ka gaari doona haddii Netflix dhab ahaantii ay leedahay wax laga baqo, laakiin wax walbaa farta kuma fiiqayaan, in kasta oo tayada hoose ee waxyaabaha la sii daayay dhawaanahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » In kasta oo AppleTV + iyo Disney +, hadana Netflix wuu sii ahaan doonaa King